Aluminium CNC igwe, Omenala Aluminium Parts - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
Ọrụ / CNC Aluminom
Mepụta ọrụ CNC machining ọrụ na-enye gị nlekọta niile na ndị otu anyị ga-enyocha ọrụ gị nke ọma ma jiri ya rụọ ọrụ nke ọma nke aluminom arụ ọrụ iji bulie oge na ego gị.
Anyị nwere ike inyere gị aka ịmepụta aluminom na ụdịrị akụkụ aluminom yana ndị ọrụ injinia anyị na ndị ọrụ aka anyị iji zute nkọwapụta nhazi gị.
Ọ bụrụ na ị na-achọ onye na-ere ihe inye gị ezigbo akụkụ aluminom akụkụ CNC arụpụtara, CreateProto bụ otu n'ime isi mmalite dị oke ọnụ ma dịkwa ọnụ ala nke pụrụ iche na-arụpụta ihe ndị eji aka rụọ akụkụ atọ dị elu na axis 5-axis CNC.
Mepụta ọrụ aluminom nke CreateProto na-agbasi mbọ ike iji nye gị usoro mara mma na ezigbo mma yana ndị otu ọkachamara na-enyocha ọrụ gị nke ọma, chọpụta ihe ngwọta kachasị mma maka gị ma hazie akụkụ gị ndị ị na-emezi n'ụzọ kachasị dị mma iji chekwaa oge na ego gị.
Ọrụ anyị nke CNC metal machining, karịsịa na aluminum prototyping, omenala aluminum machining, aluminum milling, na ndị ọzọ karịa akụkụ aluminom, anyị ka nwere ndị ọzọ CNC soft metal dị ka Magnesium, Zinc, Titanium na CNC ike metal dị ka Steel, igwe anaghị agba nchara niile bụ ọrụ anyị bụ isi.
Profesional Aluminom machining & Ahụmahụ Team
Ezigbo ziri ezi chọrọ CNC aluminum machining ga-atụ aro igwe iji nweta oke ndidi. Nnukwu ọsọ 3-axis na 5-axis vetikal CNC machining emmepe na nnukwu ahụmịhe anyị na ihe ọmụma sara mbara na-enyere anyị aka iru oke nkwụsịtụ, na-ewepụta akụkụ aluminom gị na oge. Typicaldị nhụjuanya anyị na-ahụkarị sitere na +/- 0.005 "(+/- 0.125mm) na +/- 0.001" (0.025mm) maka aluminom CNC. Anyị oru ngo oru ga-gakwuru gị na akụkụ nile nke gị ngo na ga-achọ inye ndị kasị elu ogo nke nkenke ga-ekwe omume maka oru oma nkenke machining.
Anyị mepụtara usoro ịrụ ọrụ nke ọma, nke ziri ezi ma na-akwụ ụgwọ na-eweta nsonaazụ ngwaahịa dị elu. Anyị imewe na mmemme ìgwè nyochaa ọ bụla oru ngo ọ bụghị naanị ngwa ngwa kamakwa ziri ezi iji chọpụta na-eri, manufacturability na mgbagwoju anya iji obi sie anyị izute niile nkọwa nke gị atụmatụ. Anyị nyochaa gị imewe na ịnabata ọ bụla pụrụ iche mkpa dị ka ịgbado ọkụ, EDM ma ọ bụ waya EDM usoro chọrọ. Nkwado a miri emi na-egosi na ị na-enweta usoro ịhazi ihe kachasị dị irè maka mmefu ego gị, oge na akụrụngwa.
Mgbe emepụtara CNC aluminom, dị ka achọrọ, anyị nwekwara ike ịnye nhazi nke abụọ na arụmọrụ nke ala ala na-arụchasị ọrụ dị ka agbawa ájá, ọgbụgba ọkụ, polishing, anodizing, oxidation, electrophoresis, chromate, powder powder and paint.
Dị ka ihe ndị ọzọ, emechara aluminom ka emebere ya iji chekwaa elu dị ugbu a ma ọ bụ kwalite nke ọhụụ nke na-ahụ anya ma ọ bụ na-arụ ọrụ nke ọma. N'oge nhazi, anyị na-enweta ndị ahịa anyị na-ekwurịta okwu na njedebe achọrọ. Ọzọkwa anyị na-aza mgbe niile ajụjụ niile mgbe elu gụchara iji jide n'aka na ga-enye gị anya na ị chọrọ.
5-axis CNC igwe Aluminom
CreateProto na-enye ọrụ ntinye igwe axis 5 dị elu nke na-eme ka ohere dị iche iche dị elu maka ịmepụta akụkụ dị iche iche na nha dị iche iche. 5-axis CNC igwe nwere ike ịrụ elu-nkenke machining na-egwe ọka nke ihe mgbagwoju akụkụ ga-enyere gị aka izute gị kasị sie ike n'ichepụta nsogbu.
Anyị nwere ìgwè ndị injinia na ndị ọrụ nwere ahụmịhe nwere ike ịrụ ọrụ CNC na-egwe ọka na-arụ ọrụ site na iji ọtụtụ teknụzụ teknụzụ kachasị ọhụrụ dee ụzọ ọrụ kachasị dị irè. Anyị emepewo usoro dị mma, nke ziri ezi ma na-akwụ ụgwọ iji mee ka igwe anyị rụọ ọrụ zuru ezu nke na-anapụta nsonaazụ dị elu.
Uru nke 5-Axis Machining
N'ebe a na-arụ ọrụ 5-axis, ihe eji egbutu ihe na-agafe Xes Y, Y na Z na-agbagharị ma na-atụgharị na axis A na B iji bịaruo mpempe ọrụ ahụ site n'akụkụ ọ bụla.
Igwe na akụkụ 5 nke akụkụ nwere otu ntọala.
Na-azoputa oge, na-amụba machining arụpụtaghị.
Izi ezi ka elu na ihu puru iche di elu, na emeziwanye ogo ya.
Ejighi arụ ọrụ arụ ọrụ site n'ọtụtụ ebe ọrụ, na-ebelata njehie na nkwụnye ụgwọ, obere oge aka.
Igwe na mkpọpu ala na akụkụ akụkụ. Oge ngwa ọrụ dịwanye mma na oge okirikiri n'ihi ịgbanye ngwá ọrụ / okpokoro iji nọgide na-enwe ọnọdụ kachasị mma na ọrụ mgbawa mgbe niile.
Enwere ike iji ngwa dị nkenke ma sie ike. Enwere ike ịnweta ọsọ ọsọ na ọnụego nri ka ịbelata ibu dị na ngwa ngwa.
EDM Na Waya EDM maka Ngwa Aluminom nke Igwe
A na-eji EDM (Ọdụdọ Ọdụdọ Eletriki) mezue mwepụ nke ihe site na mpempe ọrụ site na eletriki eletriki na-ewepụ usoro.
A na-ejikarị ya eme ihe na akụkụ akụkụ aluminom dị ka usoro ntinye aka inyeaka ebe enwere ike nweta akụkụ ụfọdụ dị mgbagwoju anya site na enyemaka nke EDM. Akụkụ nke ejiri ihe omimi miri emi na-esiri ike ikpochapụ nkuku, ọ bụrụ na naanị iji CNC arụ ọrụ, ọ ga-ahapụ nnukwu radius na nkuku ahụ, anaghị ekwe ka ụfọdụ. Site n'iji usoro EDM eme ihe ọ ga - ekwe omume idobe nkọ ahụ. Ngwa EDM gụnyere Blind Cavities (Keyways), Nkọwapụta Nkọwapụta, Nkịtị Akara, Fine Mkpa Emechara, Thin Walls, were gabazie.
Waya EDM bụ usoro nke ịcha ọla na ihe ndị ọzọ na-eme ka ihe na-eme ihe, nke waya na-eme njem na-emebi ihe na usoro a na-achịkwa. Na waya EDM, a na-eji waya ọla (nke a na-ejikarị ọla kọpa ma ọ bụ ọla kọpa mee ihe) n'etiti 0.1 na 0.3 mm n'obosara dị ka electrode nke na-arụ ọrụ na akụkụ a ga-egbutu, si otú ahụ mepụta ọdịdị ma ọ bụ ụdị achọrọ.
Ihe dị iche n'etiti Sinker EDM na Waya EDM dị nke ukwuu n'ụdị electrode ejiri na usoro ọ bụla, eziokwu ahụ bụ na ọ nweghị oghere achọrọ tupu achọrọ ya na Sinker EDM, yana ikike 3D nke Sinker EDM nwere ike iru, Wire EDM naanị nwere ikike iji mepụta akụkụ 2D.
Igwe obere olu maka akụkụ Aluminom
Igwe ntanye aluminom nke dị ala bụ ihe anyị na-eme iji chekwaa ego gị na oge na akụkụ 3D dị mgbagwoju anya ma e jiri ya tụnyere mmepụta site na ụzọ ndị ọzọ dị ka nkedo ma ọ bụ ịkpụzi mgbe ọnụọgụ dị obere karịa nkedo mana karịa ihe ngosi. Ọdịdị dị ala na-esite na Createproto nyere ndị nrụpụta ụgbọala, ụlọ ọrụ ahụike ma ọ bụ ụlọ ọrụ ahụike ka ha mepụta ngwaahịa dị elu na ọnụ ala, ma si otú a nwee ike ịnye ngwaahịa na mbụ karịa atụmatụ.
CreateProto nwere ike ịnye omenala Aluminom Machined Parts & Solutions.
Malite site na oru ngo efu N0W
Ọrụ anyị na-arụ ọrụ na-enye ọtụtụ ike maka ịmegharị aluminom omenala bụ otu n'ime ụlọ ọrụ dị mkpa na nke mepere emepe n'aka anyị. Obere ọsọ mmepụta nke aluminum machining bụ akwa ọrụ n'etiti prototyping na uka mmepụta na anyị na-enye.
Mgbe a kwadoro imewe ahụ, anyị nwere ike iji teknụzụ kwekọrọ na ya mepụta ọnụọgụ igwe dị ala chọrọ n'oge dị mkpirikpi na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Igwe ndị ahụ napụtara ike, ọsọ na izi ezi; anyị na-emepụta geometry ngwá ọrụ, eletrik jigs na ịchọta akụkụ dị ka otu ọsọ iji zụlite iji hụ na ngwa ngwa na-agbanwe agbanwe akụkụ. Standardkpụrụ anyị nke nkenke na-ebelata ọrụ aka nke abụọ ma na-ezere igbu oge ọrụ.
CNC Aluminium machining Ihe mezuwo Anyị na-arụ ọrụ
Aluminom bụ nke a na-ejikarị eme ihe na-abụghị ígwè. N'ihi ngbanwe ya na nhazigharị ya, yana ọtụtụ alloys ya, nwere ọtụtụ ọrụ ụlọ ọrụ, gụnyere ịkpụzi na ịrụ ọrụ. Ọ bụ ọnụ ala na formability pụtara na ọ bụ ezigbo maka prototyping, na ya akpan akpan Njirimara-eme ka ọ na-ewu ewu na ụdị nile nke ngwa na ngwaahịa. Akụkụ akụrụngwa sitere na aluminom na-adịkarị ọnụ ala n'ihi na ha nwere ike ịhazi ya obere oge karịa ọtụtụ ọla ndị ọzọ dị ka nchara ma ọ chọghị mmecha ọzọ.
Aluminom nwere ọtụtụ ụdị na akara ule dị iche iche. Typedị ọkwa aluminom ị họọrọ n'ikpeazụ dabere n'otú ị chọrọ iji metal. Maka nkọwa banyere ihe ngwọta niile dị, ị nwere ike ịgụ isiokwu Wikipedia na isiokwu ahụ.
Ihe omumu 1: 5-axis CNC Milled Aluminium ngosiputa
Aluminium ngosiputa otutu otutu eji na elu-ọgwụgwụ akpaaka ụdị, nke bụ otu n'ime ihe ndị kasị sie ike ọrụ na n'ichepụta a ụgbọ ala. N'ọtụtụ oge, ndị na-emepụta ngwaahịa na-atụ anya na ndị na-emepụta ihe ngosi ga-enwe ike ịghọta nke ọma ma attentionaa ntị na nkọwa niile metụtara ha, mana ọ bụ naanị ndị na-emepụta ihe ngosipụta nwere ahụmịhe nwere ike mezuo ndokwa nke ndị na-ahụ anya. Anyị nwere ike ịkọ site n’aha ahụ na ngosiputa ahụ bụ akụkụ dị n’isi, nke na-abụghị naanị ịrụ ọrụ anya, kamakwa ọ na-ekpebi ọdịdị nke oriọna ahụ.
Kedụ ka anyị si ahazi ihe ngosipụta nke Aluminium?
Usoro CNC Milling
Aha Aha: HDLP-ngosiputa
Ngwaọrụ Ngwaọrụ: 5-axis CNC igwe
Dimension: 180mm * 120mm * 100mm
Usoro CNC: Tingcha Ngwá Ọrụ: Oge nhazi oge:
Ọgwụgwụ ọkara R3.0 / R2.0 / R0.5 30n
Emecha-machining R0.25 / R0.15 50h
N'iburu ihe mgbagwoju anya na-echebara echiche, igwe CNC 5 axis ka ga-emeri ihe isi ike mgbe ị na-arụ ọrụ dum. Ndị injinia mmemme CNC, bụ ndị nwetara nnukwu ahụmịhe na mmepụta oriọna oriọna, ga-eme nyocha na ikike nke ịkwa igwe mgbe enwetara eserese nke imewe ahụ.
Dị ka ngosiputa, ndị dị ịrịba ama optic na-ebupụta ga milled site CNC usoro, ma na azụ n'akụkụ, e nwere oké egwu kpọkọta Ọdịdị nke siri ike na-machined site CNC -egwe ọka ebe ọ ga-ahapụ nnukwu okirikiri na nkuku. Iji nwee ọganihu, ndị ọkachamara kwesịrị ịme ọla kọpa ma jiri EDM mee ihe dị ka usoro inyeaka inyeaka iji nyere aka kpochapụ nkuku. Ọ na-abụkarị usoro a ga-ewe ọtụtụ oge.
Ugbu a ọ fọrọ obere ka ọrụ ahụ gwụ, ihe ikpeazụ a ga-eme bụ ịrụcha ọrụ. Deburring, polishing, plating, na ndị ọzọ ejiri mee post-nhazi ọrụ dị oke mkpa, ọ ga-ekpebi ọdịdị ikpeazụ.
Mgbe nile, na ngosiputa jụrụ ịbụ mirror gloss, e nwere abụọ na-eru nso na-aghọta nke a mmetụta. Otu bụ akwụkwọ ntuziaka, onye ọrụ ga-eme ka akụkụ ahụ dị ọcha ruo mgbe ọ na-enwu enwu, ị kwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-eme ka ihu igwe dị elu ebe ọ bụ na ụfọdụ optics kwesịrị idebe ọnụ ya nkọ na usoro nhịahụ nwere ike ịhapụ okirikiri na nsọtụ.
Ọzọ usoro bụ plating, mma-egweri imecha na ọ adịghị adịghị dị mkpa tupu plating. Emechaa ihe niile a, elu ikpeazụ nwere ike ịmị mara mma ma maa mma.
Ihe omumu nke abuo: Prototyping Aluminom Components maka Ngwaọrụ Medical
Nke a bụ ogwe ngwaọrụ ahụike maka Institute of Ultrasonic Instruments ndị ọkachamara na mmepe ngwaahịa maka Portable Agba Doppler. Ihe oru ngo bu ihe nkpuchi nke igwe ojii nke nwere ike ikpochapu ultrasound nke ngosi ya nwere ogo ogo 360. Ọ bụ ihe ọhụrụ na ọganihu maka imepụta ngwaọrụ ahụike nke mmepe R&D nke ndị ahịa.
Iji hụ na ịdị arọ na ike maka ichebe teknụzụ teknụzụ dị elu, onye ahịa ahọrọla igwe aluminom maka ụdị ihe atụ niile.
Ihe ịma aka kasịnụ maka ụdị aluminom a bụ ọkụ ma nwee usoro siri ike yana otu akụkụ akụkụ. MepụtaProto mere ihe ndozi ahụ na ọnọdụ ziri ezi maka nhazi anọ ma ọ bụ karịa. N'oge usoro ngwangwa ngwa ngwa, ndozi na nzukọ dị ezigbo mkpa yana ọgwụgwọ elu. MepụtaProto na-agbakọta ma na-eme ka ọ dị mma tupu a rụchaa ihe ngosi.
Ihe a choro maka aluminom na-emecha ihe osise na ihe nlere anya mere ka o yie ka ọ bụ ezigbo akụkụ dị ka a ga - asị na ọ sitere na mmepụta ihe, ọ bụghị naanị ụdị ihe atụ nkịtị. Anyị na-ese ihe oru ngo dika pantone No. onye ahia nyere ya ezigbo udiri. Anyị na-agba ya n'ime mkpuchi ihu Mat na-acha ọcha na agba site na iji agba mmanya na-eguzogide mmanya. The azụ cover bụ na matt nwa ezi udidi si akpụzi-Tech ncheta n'ezie na mmanya na-eguzogide ọgwụ agba. Aka ahụ dị na agba ka mkpuchi azụ yana agba agba roba n'elu agba ojii iji mee ka aka ahụ dị ka ezigbo njide. Igwe ihe ọgbara ọhụrụ na-eche maka keyboard bụ aluminom anodizing iji nwee mmetụta nke ike.
Ihe omumu nke 3: CNC Aluminom RC Car Parts
Ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe nke ụgbọ ala RC, mgbe ahụ ị ga-amarịrị na e nwere ọtụtụ akụkụ aluminom na ụgbọ ala RC. Ndị na-egwu egwu na-achọkarị gburugburu agbụrụ agbụrụ dị ka okwute, nke ọ bụghị naanị na-achọ nnukwu ọsọ ọsọ, mana yana ọchọrọ dị oke mkpa maka ịdịte aka nke ihe ahụ.
Ọ pụtara na ọsọ dị elu chọrọ ihe ahụ iji bụrụ ìhè dị ka o kwere mee, na nkwụsi ike chọrọ ka ihe ahụ sie ike. Aluminom akụkụ bụ ihe ndị kasị n'ọtụtụ ebe na mmiri na RC ụgbọ ala, gụnyere ahụ, etiti na wiil ehiwe na na.
N'ihi echiche dịgasị iche iche iji nọgide na-emeziwanye arụmọrụ nke ụgbọ ala RC, onye ọkpụkpọ ụgbọ ala RC na-emeziwanye atụmatụ ha mgbe niile, ụdị ọchịchọ a na-adịkarị ntakịrị, mana ọ dịkwa mkpa ịnata akụkụ ahụ n'oge na-adịghị anya, n'ihi na ndị sonyere achọghị ịhapụ agba ọsọ n'ihi ichere otu akụkụ. CreateProto dị ka onye na-emepụta ngwa ngwa nke dị mma n'inye ngwa ngwa na-abụkarị nhọrọ mbụ maka RC akụkụ aluminium, anyị nwere ahụmịhe bara ụba na ịmịpụta obere ngwaahịa aluminom, ma ha nwere ike ịghọta ma ghọta atụmatụ onye nrụpụta.
Ihe omumu nke 4: Drone / UAV / Robot CNC Machined Components
Na mmepụta ihe nke UAV / Drone na Robot akụkụ, gụnyere nsogbu dịka ihe onwunwe, usoro, ọnụahịa, oke mmepụta. Enwere otutu akụkụ enweghi ike ịbụ imepụta ihe site na iji usoro nkịtị, yabụ ịkwesịrị iji ụfọdụ usoro pụrụ iche maka ngwa nhazi obere, nwekwara ike ịgụnye njikọ nhazi akwụkwọ ntuziaka n'etiti. Ke ofụri ofụri, anyị tumadi iji CNC machining, silicone ịkpụzi, ngwa ngwa tooling na ndị ọzọ na nkà na ụzụ na-aghọta omenala ala olu mmepụta. Nke a bụ ezigbo ụzọ na oge yana ọnụ ahịa, na-agba ọsọ usoro ịmalite ngwaahịa.
Aluminom ma ọ bụ carbon fiber ihe dị ka akụkụ dị mkpa nke ihe ndị a dị mkpa iji chọọ arụmọrụ dị elu na igwe CNC dị oke mkpa nke na-arụ ọrụ na mpempe akwụkwọ nwere ike mezue usoro ahụ dum, ma kwadebere ya n'ọbá akwụkwọ ngwá ọrụ, ma nwee ngwá ọrụ akpaka. ọrụ mgbanwe. Mgbe ụfọdụ ọ dị mkpa ịghọta njikwa njikọ nke atọ ma ọ bụ karịa anyụike iji hụ na ị na-arụ ọrụ nke ngwá ọrụ nwere oke mgbagwoju anya.
O doro anya na ọchịchọ a dị oke mkpa bụ ihe ịma aka dị ukwuu maka ndị na-emepụta akụkụ. Mgbe onye mmebe ngwaahịa na-abịa ịtụ mkpụrụ osisi iri na abuo, ọ na-esikarị ike ịzaghachi, nke mere na ndị na-eweta ngwaahịa ga-echigharịkwuru na usoro eji arụ ọrụ. Ya mere, n'ichepụta olu dị ala na onye nrụpụta ihe mgbakwunye, ezigbo ụlọ ọrụ na-enwekarị ahụmịhe na ahụmịhe na-enye ezigbo ngwọta maka ihe ndị a chọrọ pụrụ iche.
Otito Prototyping na Manufacturing, CNC Rapid Prototyping, Otito Prototyping, Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services, CNC Prototyping, Fast Prototyping,